कोरोना भाइरसबारे १२ वर्ष अघि लेखेको पुस्तकको भविष्यवाणी मिल्यो । के लेखिएको छ यो पुस्तकमा हेरौं त ! – Butwal Sandesh
कोरोना भाइरसबारे १२ वर्ष अघि लेखेको पुस्तकको भविष्यवाणी मिल्यो । के लेखिएको छ यो पुस्तकमा हेरौं त !
अहिले संसारभर कोरोना भाइरसको म´हामारी छ । यसको भविष्यवाणी १२ वर्ष अघि पुस्तकमार्फत् सिल्भिया ब्राउनीले गरेकी थिइन् जुन सत्य सावित भएको छ । ब्राउनीको पुस्तकमा जे लेखेको छ त्यही भयो । उनले रो´ग ह्वात्तै फलने र हराउने र फेरि एकपटक फैलिएपछि हराउने भविष्यवाणी गरेकी थिइन् । ब्राउनी आफूसँग अलौकिक शक्ति भएको दाबी गर्थिन् । अहिले ब्राउनीको भविष्यवाणीबारे सँसारभर चासो भएको छ । सीएनएन, न्युयोर्क टाइम्सलगायतले यसबारे समाचार बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
ब्राउनीको सन् २००८ मा प्रकाशित इन्ड अफ डेज पुस्तकमा निमोनिया जस्तै ख´तरनाक रो´ग सन् २०२० मा फैलन भनिएको थियो । पुस्तकमा फोक्सोमा असर गर्ने र निमोनिया जस्तै रो´गको संक्रमण फैलन भनिएको थियो ।
भविष्यवाणी गरिएको पुस्तक प्रकाशित भएको अर्को वर्ष नै ब्राउनीको ७७ वर्षको उमेरमा नि´धन भएको थियो । उनी आफूलाई अलौकिक शक्ति भएको नारी मान्थिन् । भविष्यवाणी गरिएका पुस्तक लेख्थिन् । आध्यात्मिक पुस्तक लेखेर करोडौं कमाइन् । न्युयोर्क टाइम्सले उनको पुस्तक सर्वाधिक विक्री भएकोको सूचीमा राखेको छ ।
कतिपय आ´परधिक घटनामा प्रहरीलाई सहयोग गरेको दाबी गर्थिन् । हराएका मानिस ज्युँदो छन् कि म´रेका छन् समेत भन्थ्नि । कतिपय घटनामा उनले हराएको मानिस कहाँ छन् भनेर सत्य पत्ता लगाइदिएकी थिइन् । यसकारण पनि उनी आफूमा अलौकिक शक्ति भएको दाबी गर्थिन् ।
भविष्यवाणी गर्ने ब्राउनीले ४० पुस्तकहरु प्रकाशित गरिन् । जसमध्ये भविष्यको बारेमा बढी उल्लेख थियो र बढी विक्री भएकामध्ये पर्दथे । उनका पुस्तकमध्ये सिक्रेट्स एन्ड मिस्ट्रिज अफ दी वल्र्ड, इफ यु कुड सी ह्वाट आई सी, इन्साइट र इन्ड अफ डेज बढी विक्री भएकामा पर्छन् । इन्ज अफ डेजमा नै उनले सन् २०२० मा निमोनिया जस्तै रो´ग फैलन लेखेकी थिइन् । यो पुस्तक सन् २००८ मा प्रकाशित भएको थियो । अहिले पुस्तक र यसमा उल्लेखित रो´गको भविष्यवाणीबारेको पेज भाइरल भइरहेको छ ।
पुस्तकमा सन् २०२० तिर विभिन्न किसिमका निमोनिया जस्ता रो´गहरु सँसारभर फैलने विषय छ । फोक्सोमा आक्रमण गरी सबै किसिमका औषधीले काम लाग्न नसक्ने हुने समेत उल्लेख छ । यी वर्ष यस्तै प्रकारको रो´ग फैलने भविष्यवाणी गर्नसकेको भन्दै पुस्तकका लेखकको चर्चा छ । पुस्तकले यो रो´ग जति छिटो आयो उति छिटो नै हराउने भविष्णवाणी समेत गरेको छ । रो´गले केहीवर्षपछि फेरि आक्रमण गर्न सक्ने तर, पूर्ण रुपमा हराउने भनेको छ ।
भविष्यवाणी मिल्यो भने रो´ग चाँडै रहनेछैन । केही वर्ष यो रो´गले दुःख दिनसक्छ तर धेरै वर्ष रहँदैन । छिट्टै आउने र छिट्ट हराउने भविष्यवाणी गरिएको यो रो´ग कोरोना भाइरसको सं क्रमण हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । रो ग छिट्टै आएको छ । यो छिट्टै फैलिएको पनि छ । भविष्यवाणीमा भनिएको छ यो जति छिटो आयो उति नै छिटो हराउनेछ र पछि पूर्ण रुपमा हराउनेछ । रो´ग भविष्णवाणी गरेजस्तै छिट्टै हराउने र पूर्ण रुपमा निर्मुल हुने हो होइन प्रतिक्षाको विषय छ ।